5 Casharro Photoshop ah si loogu adeegsado saamaynta qoraalka | Abuurista khadka tooska ah
Waxyaabaha badan ee lagu gaari karo iyadoo la adeegsanayo Photoshop, saamaynta qoraalka ayaa laga yaabaa inay yihiin kuwa ugu caansan, maaddaama ay la wadaagaan sawirradu badanaa waa kuwa ugu muhiimsan astaan, cinwaan ama xayeysiin kasta. Sidaas awgeed halkan waxaan ku soo bandhigeynaa 5 Casharro Photoshop ah si loogu adeegsado saamaynta qoraalka.
Qoraalka qoraalka oo leh saameyn neon. Tani waa mid ka mid ah saameynta qoraalka ugu caansan ee jirta, maaddaama ay noo oggolaaneyso inaan abuurno qoraal u ekaysiinaya iftiinka neon. Xaaladdan oo kale, casharka waxaa lagu sharaxay fiidiyoow wax ka yar 8 daqiiqo oo dherer ah halkaasoo si faahfaahsan loogu sharaxay sida lagu gaaro saameynta.
Casharrada qoraalka qurxinta leh. Kani waa casharro ka kooban dhawr tallaabo oo lagu baray in lagu qurxiyo qoraalka waxyaabaha ku jira dabeecadda. Waxaad ugu horreyntii ku shaqeysaa qaababka lakabka, oo lagu daray burush sidoo kale waa la isticmaalaa.
3D barashada qoraalka dhalaalaya. Xaaladdan oo kale, waa cashar u oggolaan doona inaan ku darno saameyn dhalaalaysa 3D qoraal kasta. Qeyb ka mid ah casharradu waxay u baahan yihiin adeegsiga barnaamijka naqshadeynta ee Xara 3D.
Barashada qoraalka jaban. Tani waa casharro aad u wanaagsan oo lagu abuurayo saamayn ku jirta qoraalka oo u ekeysiinaya muraayad jaban ama jabtay oo sida ku cad abuurashiisa ay u baahan tahay 45 daqiiqo iyadoo la adeegsanayo qaab shub ah oo la soo saaray.
Casharrada qoraalka birta ah. Tani waa casharro markii la dhammeeyo, natiijooyinka waxay noqon karaan kuwo aan caadi ahayn; Laga soo bilaabo qoraalka cad, waxaa suurtagal ah in lagu daro qoto dheer, iftiin iyo muuqaal muuqaal aad u soo jiidasho badan leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 5 Casharro Photoshop ah si loogu adeegsado saamaynta qoraalka